I-Yoga iyaziwa kakhulu. Lolu hlobo lomsebenzi oluzimele luvela eNdiya, kodwa manje lwenziwa emhlabeni jikelele. Enhliziyweni yeHatha Yoga isebenza nomzimba nokuphefumula. Noma kunjalo, ithonya lakhe lidlula kude nomzimba. Kubuye kuhlanganise nemizwelo nokucabanga. Okuhlangenwe nakho kubonisa ukuthi ingqondo nomzimba zingene ngaphakathi komunye nomunye. Isimo sengqondo sithinta isimo sethu sengqondo, impilo, kanye nesimo semvelo sithonya amandla ethu, amandla kanye nesimo sengqondo emhlabeni.
Kutholakala ukuthi ezinye izikhundla zomzimba zisiza ukuba zibuyisele ngokushesha amandla, zithole ukuthula futhi ziphumule, kuyilapho ezinye zivuselela, zinike umdlandla futhi zizethembe.
Incazelo yeHatha yoga ukuvumelanisa amandla ethu.
Ha kusho amandla asebenzayo, ashisayo, alanga, ilanga, i-Tha - ayinandaba, ibanda, inyanga, insikazi. I-Hatha yisimo somlinganiso.
Ngemuva kokuzivocavoca, sifika esimweni sokuphumula kanye nokulinganisela ngenkathi sigcwalisa amandla nenjabulo yokuphila.
Ukuze ufeze lokhu, i-yoga inikeza izindlela ezahlukene zokuzivocavoca nezindlela zokuzifeza, ukuze wonke umuntu akhethe okuthile. Njengomthetho, izinto ezingaba ngu-200 zithengiswa, nakuba imibhalo yasendulo ithi kunezingu-84 000 zazo.
Esikhathini sokuzivocavoca ungathola abantu abavela ku-16 kuya eminyakeni engaphezu kwengu-80. Akukhathaleli ukudala noma ukubukeka, kuphela isifiso sokuthuthukisa ikhwalithi yokuphila komuntu siqu nokusebenza ngokwakho kubalulekile. Yiqiniso, kungenjalo abantu abasha bahlanganyele, begcwele amandla namandla. Ngenjabulo benza ukuvivinya umzimba okunamandla, kunzima kakhulu, kukuvumela ukuba uhlakulele amandla nokukhuthazela.
I-Yoga inikeza izikhundla eziningi ezingenzeki kwezinye izindlela zokuzisebenzela wena, njengokubheka okunamandla kakhulu emuva. Abantu asebekhulile bakhetha ukuzivocavoca, ukuphumula, ukusiza ukugcina ukukwazi nokusebenza kwaminyaka yonke.
Ngokuzilibazisa, ukususwa kokuvinjelwa kwemisipha namalungu, kanye nokuzivocavoca ngokugcwele ngokulondolozwa kokuphefumula okufanayo, ukunakwa kugxila ezweni elingaphakathi, okusiza ukuzolalisa ingqondo nayo yonke inqwaba yamandla.
I-Indian master ye-yoga B.K.S. I-Iyengar ithuthukiswe ngesisekelo sohlangothini lwakhe kanye nokuhlangenwe nakho kwabafundi bakhe ukuqeqeshwa okukhethekile okuqhubekayo kokuzivocavoca okuhlukahlukene ezivela ezifweni: amakhaza, ubuhlungu emuva, izinkinga zomshoshaphansi nabanye ukucindezeleka nokukhathala okungapheli.
Ngenzuzo enkulu kubo kanye nezingane zabo zesikhathi esizayo bangahlanganyela ngisho nabesifazane abakhulelwe.
Lezi zifundo kufanele zihlolwe kuphela ngamakhosi akhethekile abanezimo kanye neziqu ezifanele.
I-Yoga poses yenziwa ngendlela ecacile, evumela ukuthi ufinyelele noma yikuphi ingxenye yomzimba, esikhumbeni, emasipha, amalunga kanye nokuphela kwezitho zangaphakathi. Iseli ngalinye lihlanzwa futhi ligcwele umoya-mpilo.
Izinguquko zemizwelo, isimo sengqondo nendlela yokuphefumula zibonakala emva kwezinhlelo ezimbalwa. Noma kunjalo, ukuqonda okujulile kwe-yoga kuthatha iminyaka eminingana.
Njenganoma iyiphi indlela yemvelo yokwelapha, umphumela awutholakali ngokushesha. Lokhu kulandela ukuthi i-yoga ifuna ukuthola umthombo wezinkinga. Isibonelo, ukulwa nobuhlungu bokubuyela emuva, ngokuvamile kubalulekile ukubuyisela ukuhamba kwe-hip, ukuqinisa imisipha yangemuva, ukunakekelwa kokuhleleka okufanele ngesikhathi sokuphila kwansuku zonke.
Izinto zenziwa ngokucophelela okukhulu. Kuzo zonke izinto zokuzivocavoca, sifinyelela emkhakheni wezinhlelo zethu futhi kancane kancane sidlule. Akukho ndawo yokunyakaza okubukhali nokuhlukumeza, okuyinto evame ukudala ukulimala.
Kubalulekile ukwenza izivivinyo ngokuhambisana namakhono ethu akhona, futhi ziyahlukahluka kuye ngokuthi ubudala, isikhathi, isikhathi sosuku, ukudla okunomsoco, ukulala, umsebenzi. Iqoqo lokuzivocavoca kufanele lifanane nalokhu.
Ezikoleni ze-yoga, ngokuvamile kuvame ukukhetha phakathi kwamaqembu obukhulu obuhlukene.
Isinyathelo esilandelayo emva kokuthola izikhundla ze-yoga ziphumula futhi ziphefumula. Ukuphefumula ngumthombo obaluleke kakhulu wamandla.
Awukwazi ukudla, ukuphuza noma ukulala izinsuku ezimbalwa, kodwa awukwazi ukuphefumula imizuzu embalwa nje. I-Yoga ithi impilo yomuntu ingalinganiswa ngeminyaka, kodwa ngenani lokuphefumula elithathwe. Ukuphefumula isikhathi eside nokugcwele, isikhathi eside siyoba nokuphila.
Isibonelo esiphilayo se-BKS eneminyaka engu-81 ubudala. Iyengar. Eminyakeni embalwa eyedlule, ngesikhathi e-United States, odokotela bathole ukuthi unamaphaphu, njengo-Olympian oneminyaka engu-20 ubudala.
Ukuzivocavoca njalo nokuphumula kuzosiza ukugcwalisa amandla, okuthuthukisa ikhono lethu lokusebenza, ikhono lokugxila. Ngemuva kwesikhathi esithile sokuqeqeshwa ngenxa yokuhlanza umzimba nokuxhumana okujulile nezwe lethu langaphakathi, siqala ukuzwa ukuthi kuncike ekudleni, emzimbeni, ekusebenzisaneni nabanye abantu kanye nempilo yethu nenhlalakahle.
Lokhu ukuzwela kuyigugu eliyigugu endleleni yokuthuthukiswa kwethu okubalulekile, ngokomzimba, ngokomzwelo nangokomoya.
Uju, i-garlic kanye ne-apula cider uviniga yi-tincture yemilingo yezempilo!
I-sorrel yamahhashi yindoda ephilile kusukela esikhathini sika-Avicenna
"Pantokaltsin" - nokubuyekezwa imithi
Ubaba uSatachy: umzana waseFilippovskoe, isonto laseSt. Nicholas
Izigqoko ezivela emaceleni - isitayela nenduduzo
Dotage: izimpawu, izimbangela kanye nokwelashwa
Blender Bosch MSM 88190: ukubuyekezwa, izincazelo, Uhlolojikelele
Restaurant "Maxim" eSt. Petersburg